/blog/Gallery/Tilmaanta Iibsashada oo Dhammeystiran 2019 ee loogu talagalay SARM SR9009 Joogtada Dhismaha
Posted on 10 / 14 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
SR9009 ama stenabolic waa CAS 1379686-29-9 dheeri ah oo lagu qiyaaso saamaynta jimicsiyada wadnaha. Kaliya maaha dawadu inay kaa caawineyso inaad yareyso qaar ka mid ah dufanka jirkaaga xad-dhaafka ah, laakiin waxay sidoo kale kor u qaadi doontaa xasilloonidaada iyadoo sii kordhineysa adkeysiga.
SR9009 SARM wuxuu door muhiim ah ka ciyaara dhiirigalinta Rev-Erb. Borotiinkani wuxuu saameeyaa awoodda jirka si uu u gubo dufanka xad dhaafka ah, sokorta, iyo kolesteroolka xun. Sidaa darteed, waxay kor u qaadeysaa habka miisaanka luminta iyadoo la hagaajinayo adkeysi. Xitaa haddii aad jimicsi sameyneysay, waxaad dareemeysaa firfircoonaan iyo tabar yarida taas oo aad sameyn karto tababbar badan oo jireed.
Stababolic metabolizes dufanka, lipids, iyo sokorta. Marka isticmaalka shidaalka ee jirka uu ugufiican yahay, markaa shaki la'aan waad gaari doontaa waxqabadka ugu sarreeya. Daraasad la taaban karo oo la adeegsanayo moodooyinka dilka, jiirka ka hooseeya SR9009 budada (1379686-30-2) qiyaasta waxay ka shaqeyn kartaa laba jeer ka dhakhso badan sidii hore. Caddeyntan waxay noqon kartaa sababta stenabolic loogu taxay liiska daawooyinka mamnuuc ka ah ciyaaraha fudud.
Haddii aadan ahayn xamaasad ciyaalnimo, warkan waa waxa dhagahaagu jecelyihiin inay maqlaan. Stenabolic sidoo kale wuxuu labanlaabmaa heerka dheef-shiid kiimikaadkaaga inta aad nasanayso. Kaddib marka aad cunto qaadatid, jirkaaga ayaa caadi ahaan cuntada u beddelaya dufan. Si kastaba ha noqotee, miisaanka luminta ee loo yaqaan 'SR9009 miisaanka luminta' ayaa isla markiiba xoojin doona dheef-shiid kiimikaadka taas oo aad bilaabi doonto gubida dufanka isla markaaba.
SR9009 SARM waxay hagaajineysaa hababka dheef-shiid kiimikaadka. Mar haddii ay dhacdo qadashada, stenabolic wuxuu jirka u dejineyaa jirka si uu u gubo kalooriga xad-dhaafka ah halkii uu u beddelan lahaa dufan. Kaliya kaliya maaha dheellitirka dhexdhexaadinta hida-daha keydka, laakiin waxay sidoo kale yareynaysaa soosaarka unugyada dufanka cusub ee beerka.
Dheeraadkani kaliya maahan inuu kordhiyo muruqyada laakiin sidoo kale wuxuu hagaajiyaa xooggeeda iyo waxqabadka. Dareenka aad heshid ka dib markaad maamusho qiyaasta SR9009 waxay u dhigantaa tan culeyska.
Caafimaad ahaan, SR9009 waxay kaalmaysaa dadka waayeelka ah ee la dhibaataysan daciifinta murqaha ama sarcopenia.
Inta badan jimicsiyadu ma seegi doonaan ku darista muruqa 'SR9009' oo daroogada ka hela dhismahooda dhismahooda. Waxaad kor u qaadi doontaa culeyska, waxaad socodsiin doontaa gaariga socodka, ama waxaad sameyn doontaa jimicsi aad doonto adigoon dareemaynin daal ama waji madax.
Kordhinta ayaa shaki la'aan shaki galineynin waxqabadkaaga mid heer sare ah sidii uu markii hore ahaa. Haddii aad u maleysay in faa'iidooyinka SR9009 ay ahaayeen khayaano, waa inaad su'aal ka keentaa sababta ay hay'adda anti-doping u xayirayso adeegsiga cayaaraha tartamada.
Sida uu Thomas Burris, aasaasaha Stenabolic, uu yidhi, dawadu waxay kuu bedelaysaa inaad noqotid ciyaartooy xilli wanaagsan leh waqti go'an. Kuma dhammaan doontid tamar ama xasilnaan xitaa markaad sameyneyso jimicsi daran.
Thanks to gaaban ee SR9009-nus-nolosha, saameynta baraaruga waxay noqon doontaa mid gaagaaban. Sidaa darteed, ma noqon doontid insomniac maalinta oo dhan.
SR9009-nus-nolosha waxay u gaaban tahay afar saacadood. Sababtaas awgeed, waa inaad u kala qaadsiisaa qaddarkaaga muddo ku siman afar saacadood si loo xasiliyo daroogada bioavailability ee marinka dhiigga.
SR9009 qiyaasta qiyaasta waxay ku xirneysaa arrimo dhowr ah. Taasi waa, waxaad jeceshahay inaad ku guuleysato iyo haddii aad ku dareyso kaalmooyinka kale ee wareeggaaga. Ka sokow, qadarka dawada ayaa sidoo kale la raacayaa sida jidhkaagu u dhaqmo.
Stenabolic ma aha a steroid. Sidaa darteed, qaadashadu ma faragelinayso nidaamka hormoonnada. Heerarka testosterone-tuka hoos uma dhici doonaan, sidoo kalena daroogada kuma daadin doonaan estrogen. Haweenka, kaabisku ma dhalin doono caadad aan caadi ahayn.
Sidaad horeyba u ogtahay, stenabolic wuxuu leeyahay nolol nus-xawli ah, oo aan kuu dhamaan doonin maalin dhan. Ka soo horjeedda, jiritaanka bioarine-ka bioaine wuxuu sii kordhayaa saacadaha 24. Isku darka labadan waxay ku dambayn doontaa saameyn 24 / 7.
Marka on SR9009 xirmada, qiyaasta qaadashadu waa kaliya 10mg, oo ay tahay inaad qaadato wax yar ka hor intaadan shaqada bilaabin. Wixii loogu talagalay GW501516, dawada habboon ayaa ah 20mg / maalin, oo aad adigu ku maareynaysid quraacdaada.
Waxaa jiray warar sheegaya in SR9009 leeyahay eber bioavailability, gaar ahaan maamulka afka. Si kastaba ha noqotee, si kalsooni leh ayaan u beenin karaa tan sababtoo ah haddii dheeriku uusan bioavቭ jirin, markaa ma jiri karto natiijooyin wanaagsan oo ah 'SR9009' jirka bini aadamka.
Jirdhiska jirka ka dib bulshida ama goynta wuxuu si buuxda uga faa'iideysan doonaa SR9009. Xaaladaha ay tahay inaad si adag u tababarto, dawadu waxay kordhisaa garaaca wadnahaaga ugu badan, sidaas darteed waxay xaddideysaa wejiga iyo daalka. Waa maxay waxa intaa ka badan, kabidda jirka ee SR9009 waxay yareyneysaa bararka iyo dhaawaca unugyada sidaa darteed habka soo kabashada ayaa sida ugu dhaqsaha badan.
Si kastaba ha noqotee, hufnaanta dawadan ayaa laf dhabar u ah doodaha ka dhex jira saynisyahano iyo cilmi baarayaal iyo saynisyahano aad u badan. Tusaale ahaan, waxaa jiray wareer in SR9009 afka laga qaato bioavailability waa eber. Hagaag, anigu ma doonayo inaan u dhaqmo u-doodaha shaydaanka, laakiin 95% dadka isticmaala stenabolic waxay cadeeyaan waxtarkooda. Ka sokow, waa inaad isweydiisaa sababta ururrada lidka ku ah daawooyinka ay u lahaan karaan dareemayaasha mamnuucaya adeegsiga ciyaaraha markii maaddadu aysan fiicnayn.